Somalia Without Rules | Somali - Diaspora
Somalia Without Rules
Wednesday, October 10th, 2012 – Magaca waxaad ka dheehan kartaa in si guud Soomalidu ay u la’adahay ama u hareer marsantahay nidaamka dawliga ah. maqaalkani waxaan ula jeedaa inaan ku iftiimiyo habraac la’aanta dawliga ah ee ka jirta soomalia inta aan ka gaaro. soomalia waxaa lagu sheegaa dal ay midayso waxyaabo badan oo ay wadamo badan oo caalamka ahi aysan dadkeedu midayn waxaana kamida in soomalidu tahay dad isku diin ah, dhaqan ah, af ah iyo waliba isku midab ah. hadaba waxaad ogataan in dadka noocaas oo kalle loo tilmaamaai aaney inta badan hal dal kuwada noolayn aduunka maanta.
Suaashu waxay tahay dhamaan arrimahaasi waa kuwii sahli lahaa in dadka noocaas ahi ay yeeshaan nidaam iyo midnimo maadaama aysan jirrin wax lagu kala sooco oo ay muujinayso waxa afka qalaad lagu yiraahdo “ethnic difference”. hadaba Soomaliya: nidaam la’aan waa maqaal aad ay ula yaabi doonaan dhamaan cid kastoo aan soomali u hayb sheegan waayo waxay og yihiin wax mideeyo dad oo ay Soomali wada haysato kaddibna kama gadmayo maankooda in dad noocaas ahi ay noqdaan nidaam la’aan. hadii aan usoo daadadgo dulucda maqaalkani waxaa soomalida ku dhacay is badal saamayn wayn ku yeeshay nolashii qof kasta oo soomali ah. waxaa dalkii lagu sheegi jiray jamhuuriyada toddobada ka dhacay is badal siyaasadeed oo ay soomali horboodayso aysana ka marnayn gadaal ka riixid shisheeye haba ahaadeen kuwo aan dano qalafsan ka lahayn soomalia. Waxaa soomalia ku sugan ciidamo shisheeye oo inta la ogyahay Africa ka yimid inta la sheegsheego ama aan la ogayne caalamka oo dhan ka yimid. Ugama hadlayno maqaalkan waxa ay u yimaadeen iyo danaha shisheeye ee waxaan ku gaabsanayaa danaha Soomaali iyo sida au hiigsan la adahay oo ay u ugu horayso fahan la’aanta nidaamka dawliga ah.
Soomaaliya maanta waxaa ka jira dawlad rasmi ah oo leh gole wakiilo si toos ah uga yimid hogaamada dhaqanka umada soomaliyeed kuwaas oo si aan toos ahayn uga turjumaya shacabka soomalia, waxa barlamaakaasi horyimid musharixiin u taagnaa kursiga dalka looga arrimyo ee madaxwaynaha. waxaana sihufan ay u qabsadeen doorasho golle loo joogo waxaana ay doorteen madaxwayne kaas oo ugu danbayn doortay wasiirkiisi kowaad. si kastaba ha ahaatee dawladan oo ah mid federaali ah waxaa muuqda in ay xadidantahay nadaamka ay ku shaqayn karto. Dawlad kasta oo federaali ah waxay leedahay ujeedooyin ku kalifay in ay nidaamka federaal adeegsato, Soomaliya wali ma cada sababta kaliftay nidaamkan lakiin kaba soo qaad federaali qabiili ah oo aan ahayn qawmi waayo qawmiyadu waxay leedahay waxay kaga duwantahay kuwa kalle oo ay dalka wadaagaan lakiin Soomaliya laguma sheegin taariikh ahaan qawmiyad ka gadisan mid kalle oo dalka ka jirta. qodobkani waa nidaam la’aanta ugu horaysa ee ay Soomaliya lugaha kula jirto sida ay uga baxdana amaba ay ugu socotana aysanba u muuqan.
Aan niraahno Soomaaliya oo federaali si kastaba ha u noqotee nidaamkee laga rabaa?.
Nidaamka federaaliga ah oo ay dawladi ku dhaqantaa waxa u leeyahay ujeedooyin xaddidan oo markii horaba kalifay in lagu dhaqmo marka danbana leh sababihii loogu dhaqmi lahaa . soomalia waxay isku darsatay iyadoo aan lahayn asbaabo keenay in federaal ay ahaato iyo waliba iyadoo aan lahayn qaabkii ayba xataa ugu dhaqmi lahayd. Dawlad kasta oo federaali ah waxay leedahay maamulo deegaameed leh ismaamul hoosaad leh shaqooyin xaddidan si toos ahna u hoos taga dawlada dhexe ee federaaliga ah. maamuladaasu ma lahan awood ka baxsan mida nidaamka federaaliga ahu qeexayo. Hadaba Soomaaliya marka ugu horaysaba malahan dawlad deegaameedyo aan ka ahayn kuwo siyaasadaysan oo laftirkooduba aan cago ku taagnayn, ma lahan xisbiyo siyaasadeed oo mid dawlad deegaan ilaa heer federaal shaqeeya waana tan keentay in siyaasada dawlad deegaamadu lidi ku noqdaan tii federaalka ama dawladii dhexe waayo ma jiran hadaf siyaasadeed oo ka dhaxeeya maamul goboleedada iyo dawlada dhexe.
Hadaba waxaan kusoo gunaanadayaa Soomaaliya waxay cagta saartay tub ay ku daadsan tahay qodxo iyo walxo badan oo ay halis ugu tahay inay ku baab’ado waxaana ugu horaysaa in magaalo hoostimaada Soomaliya ay ahaan waydo mid Soomaaliyaysan.
Wadaniyadda iyo Madaninimada Somalia: the new political order’s pros and cons, and the way forward